Wararka - Baahida caalamiga ah ee paraquat ayaa laga yaabaa inay korodho
Baahida caalamiga ah ee paraquat ayaa laga yaabaa inay korodho
Markii ICI ay soo saartay paraquat suuqa 1962-kii, qofna waligiis ma malaynayn in paraquat uu la kulmi doono xaalad adag oo adag mustaqbalka. Tani heer sare ah oo aan la soo xulin herbicide ballaaran ayaa lagu qoray liiska labaad ee ugu weyn adduunka. Hoos u dhaca ayaa mar ahaa ceeb, laakiin iyadoo qiimaha sare ee Shuangcao uu sii socdo sanadkan oo ay u badan tahay inuu sii socdo, waxay ku dhibtoonaysaa suuqa caalamiga ah, laakiin paraquat-ka la awoodi karo ayaa soo jiidanaya waaberiga rajada.
Heerbicide xiriir aad u wanaagsan oo aan la dooran
Paraquat waa bipyridine herbicide. Dhir-daaweedka waa xiriir-daaweedka aan la dooran ee ay samaysay ICI 1950-meeyadii. Waxay leedahay spectrum herbicidal ballaaran, fal xiriir degdeg ah, iska caabin nabaad-guurka roobka, iyo doorasho la'aan. Iyo astaamo kale oo aad u wanaagsan.
Paraquat waxaa loo isticmaali karaa in lagu xakameeyo beeritaanka ka hor ama soo ifbaxa haramaha ka dambeeya ee miraha, galleyda, sonkorta, digirta iyo dalagyada kale. Waxa loo isticmaali karaa qallajiye ahaan xilliga goosashada iyo sidoo kale sida qallajiye.
Paraquat waxay dishaa xuubka chloroplast ee haramaha inta badan iyadoo la xiriirta qaybaha cagaarka ah ee haramaha, saameynaya samaynta chlorophyll ee haramaha, taas oo saameynaysa photosynthesis ee haramaha, iyo ugu dambeyntii si dhakhso ah u joojiso koritaanka haramaha. Paraquat waxay saameyn xoog leh ku leedahay unugyada cagaaran ee dhirta monocot iyo dicot. Guud ahaan, haramaha waxaa lagu beddeli karaa 2 ilaa 3 saacadood gudahood ka dib codsiga.
Xaaladda iyo xaaladda dhoofinta paraquat
Sababtoo ah sunta paraquat ee jidhka bini'aadamka iyo waxyeelada ka iman karta caafimaadka bini'aadamka ee habka codsiga aan caadiga ahayn, paraquat waxaa mamnuucay in ka badan 30 waddan oo ay ku jiraan Midowga Yurub, Shiinaha, Thailand, Switzerland iyo Brazil.
Marka loo eego xogta ay soo saartay 360 Warbixinnada Cilmi-baarista, iibka caalamiga ah ee paraquat sanadka 2020 ayaa hoos u dhacay ilaa 100 milyan oo doolarka Mareykanka ah. Marka loo eego warbixinta Syngenta ee paraquat la sii daayay 2021, Syngenta waxay hadda iibisaa paraquat 28 waddan. Waxaa jira 377 shirkadood oo adduunka oo dhan ah kuwaas oo diiwaangeliyay qaabaynta paraquat ee waxtarka leh. Syngenta waxay ku xisaabtamaysaa ku dhawaad ​​mid ka mid ah iibka caalamiga ah ee paraquat. Rubuc.
2018, Shiinuhu wuxuu dhoofiyay 64,000 tan oo paraquat ah iyo 56,000 tons 2019. Meelaha ugu muhiimsan ee loo dhoofiyo paraquat Shiinaha 2019 waa Brazil, Indonesia, Nigeria, United States, Mexico, Thailand, Australia, iwm.
Inkasta oo paraquat laga mamnuucay wadamada muhiimka ah ee wax soo saarka beeraha sida Midowga Yurub, Brazil, iyo Shiinaha, iyo mugga dhoofinta ayaa hoos u dhacay dhowrkii sano ee la soo dhaafay, iyada oo la raacayo duruufaha gaarka ah in qiimaha glyphosate iyo glufosinate-ammonium ay sii wadaan sanadkan sare u kaca waxayna u badan tahay inay sii korodho, Paraquat, oo ah nooc quus ku dhow, ayaa keeni doona nolol cusub.
Qiimaha sare ee Shuangcao wuxuu kor u qaadaa baahida caalamiga ah ee paraquat
Markii hore, marka qiimaha glyphosate uu ahaa 26,000 yuan/ton, paraquat wuxuu ahaa 13,000 yuan/ton. Qiimaha hadda ee glyphosate weli waa 80,000 yuan/ton, qiimaha glufosinate-na waxa uu ka sarreeyaa 350,000 yuan. Waagii hore, baahida ugu sarreysa ee caalamiga ah ee paraquat waxay ahayd qiyaastii 260,000 tan (oo ku saleysan 42% badeecada dhabta ah), taas oo ah ilaa 80,000 tan. Suuqa Shiinaha waa qiyaastii 15,000 oo tan, Brazil 10,000 oo tan, Thailand 10,000 oo tan, iyo Indonesia, Mareykanka, iyo Thailand. Nigeria, India iyo dalal kale.
Iyadoo la mamnuucay dawooyinka dhaqameed sida Shiinaha, Brazil, iyo Thailand, aragti ahaan, in ka badan 30,000 oo tan oo suuqa suuqa ah ayaa la sii daayay. Si kastaba ha ahaatee, sanadkan, iyada oo si degdeg ah u kordhay qiimaha "Shuangcao" iyo Diquat, iyo suuqa aan dadka lahayn ee Maraykanka Iyadoo la xoreeyay codsiga mashiinka, baahida suuqa Maraykanka ama Waqooyiga Ameerika ayaa kor u kacday ilaa 20%, taasoo kicisay baahida loo qabo paraquat oo taageertay qiimaheeda ilaa xad. Waqtigan xaadirka ah, saamiga qiimaha / waxqabadka ee paraquat ayaa aad u tartamaya haddii uu ka hooseeyo 40,000. xoog
Intaa waxaa dheer, akhristayaasha Koonfur-bari Aasiya guud ahaan waxay soo sheegeen in meelaha ay ka mid yihiin Vietnam, Malaysia, iyo Brazil, haramaha si degdeg ah u koraan inta lagu jiro xilli-roobaadka, iyo paraquat ayaa si fiican u adkaysta nabaad guurka. Sicirka dawooyinka kale ee loo yaqaan 'biocidal herbicides' ayaa aad sare ugu kacay. Beeraleyda deegaanadaas ayaa weli waxaa ka jira baahiyo adag. Macaamiisha maxalliga ah ayaa sheegay in suurtagalnimada helitaanka paraquat-ka kanaalada cawlan sida ganacsiga xuduudaha ay sii kordhayaan.
Intaa waxaa dheer, walxaha ceeriin ee paraquat, pyridine, ayaa iska leh warshadaha kiimikada dhuxusha ee hoose. Qiimaha hadda waa mid xasiloon 28,000 yuan/ton, taas oo runtii ah koror weyn marka loo eego kii hore ee 21,000 yuan/ton, laakiin wakhtigaas 21,000 yuan / ton ayaa horeba uga hooseeyay khadka kharashka ee 2.4 Toban kun yuan/ton. . Sidaa darteed, inkasta oo qiimaha pyridine uu kor u kacay, weli waa qiimo macquul ah, taas oo ka sii faa'iideysan doonta kororka baahida caalamiga ah ee paraquat. Qaar badan oo soo saarayaasha paraquat-ka gudaha ayaa sidoo kale la filayaa inay ka faa'iidaystaan.
Awoodda shirkadaha waaweyn ee wax soo saarka paraquat
Sannadkan, sii-deynta awoodda wax-soo-saarka paraquat (100%) waa mid xaddidan, Shiinahana waa soo saaraha ugu weyn ee paraquat. Waxaa la fahamsan yahay in shirkadaha gudaha sida Red Sun, Jiangsu Nuoen, Shandong Luba, Hebei Baofeng, Hebei Lingang, iyo Syngenta Nantong ay soo saaraan paraquat. Markii hore, markii paraquat uu ku jiray sida ugu wanaagsan, Shandong Dacheng, Sanonda, Lvfeng, Yongnong, Qiaochang, iyo Xianlong waxay ka mid ahaayeen soosaarayaasha paraquat. Waxaa la fahamsan yahay in shirkadahani aysan hadda soo saarin paraquat.
Red Sun waxay leedahay saddex dhir oo soo saarta paraquat. Waxaa ka mid ah, Nanjing Red Sun Biochemical Co., Ltd. waxay leedahay awood wax soo saar oo dhan 8,000-10,000 tan. Waxay ku taal Nanjing Kiimikada Warshadaha Park. Sannadkii hore, 42% ee alaabta jidhku waxay lahaayeen wax soo saar bishiiba 2,500-3,000 oo tan. Sannadkan, waxa gebi ahaanba joojiyey wax-soo-saarkii. . Warshadda Anhui Guoxing waxay leedahay awood wax-soo-saar dhan 20,000 oo tan. Warshadda Shandong Kexin waxay leedahay awood wax-soo-saar dhan 2,000 oo tan. Awoodda wax-soo-saarka Red Sun ayaa lagu sii daayay 70%.
Jiangsu Nuoen waxay leedahay awood wax soo saar oo ah 12,000 tan oo paraquat ah, wax soo saarka dhabta ah waa qiyaastii 10,000 tan, kaas oo sii daaya qiyaastii 80% awoodiisa; Shandong Luba waxay leedahay awood wax-soo-saar 10,000 tan oo paraquat ah, wax-soo-saarkeeda dhabta ahi waa qiyaastii 7,000 oo tan, taas oo soo saarta qiyaastii 70% awoodda wax-soo-saarka; Wax soo saarka Hebei Baofeng ee paraquat waa 5,000 oo tan; Hebei Lingang wuxuu leeyahay awood wax-soo-saar 5,000 tan oo paraquat ah, wax-soo-saarka dhabta ah wuxuu ku saabsan yahay 3,500 tan; Syngenta Nantong waxay leedahay awood wax soo saar oo ah 10,000 tan oo paraquat ah, wax soo saarka dhabta ahna waa ilaa 5,000 oo tan.
Intaa waxaa dheer, Syngenta waxay leedahay xarun wax soo saar 9,000-ton ah oo ku taal warshadda Huddersfield ee Boqortooyada Ingiriiska iyo xarun 1,000-tan ah oo Brazil ah. Waxaa la fahamsan yahay in sanadkan uu sidoo kale saameeyay cudurka faafa ee hoos u dhaca wax soo saarka, hoos u dhigista wax soo saarka 50% hal mar.
Paraquat weli waxay leedahay faa'iidooyin aan la bedeli karin dalal badan oo adduunka ah. Intaa waxaa dheer, qiimaha hadda ee glyphosate iyo glufosinate sida tartamayaashu waa heer sare oo sahaydu waa mid adag, taas oo bixisa fikrado badan oo loogu talagalay kororka baahida paraquat.
Ciyaaraha Olombikada Jiilaalka ee Beijing ayaa la qaban doonaa bisha Febraayo ee sanadka soo socda. Laga bilaabo Janaayo 2022, warshado badan oo waaweyn oo ku yaal waqooyiga Shiinaha ayaa wajahaya khatarta ah inay joojiyaan wax soo saarka 45 maalmood. Waqtigan xaadirka ah, aad ayay u badan tahay, laakiin weli waxaa jira heer cayiman oo hubaal la'aan ah. Joojinta wax soo saarka waxay ku xiran tahay inay sii xumeyso xiisadda u dhexeysa saadka iyo baahida glyphosate iyo alaabada kale. Wax soo saarka Paraquat iyo iibinta ayaa la filayaa inay ka faa'iidaystaan ​​fursadan si kor loogu qaado.